Dhaamsa ABO | OromianEconomist
Oromia: Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo Irraa kenname: Olola Dharaa Oomishee Facaasuu fi Ummata Shoororkeessuudhaan Umrii Bittaa isaa Dheereffachuuf Dhama’uun Mootummaa Wayyaaneetiif Aadaa Tahe. November 5, 2015
Tags: ABO, Development problems of Oromia, Dhaamsa ABO, malpractice and violence by the ruling TPLF to stay on and maintain the 24 years tyrannic rules, Oromo, Oromummaa OLF, The Oromo Liberation Front (OLF)
Olola Dharaa Oomishee Facaasuu fi Ummata Shoororkeessuudhaan Umrii Bittaa isaa Dheereffachuuf Dhama’uun Mootummaa Wayyaaneetiif Aadaa Tahe.
(Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo Irraa kenname, Sadaasa 05, 2015) Mootummaan Wayyaanee olola dharaa daangaa hin qabnee fi duula shoororkeessummaa, haaressa Adda Bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti banee jira. Humnootiin tikaa fi miidiyaan Wayyaanee akkuma amala isaanii fiilmii dharaa maqaa Adda Bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo xureessu oomishuuf har’as olii fi gadi kaataa jiru . Duulli maqaballeessii fi jibbisiisaan kunis waan haaraa utuu hin taane itti fufa kan ammaan duraa ti. Gama biraanis humnootiin tikaa Wayyaanee maqaa miseensota Adda Bilisummaa Oromoo fi shoororkeessitoota jedhuun wayta ammaa ilmaan Oromoo nagaa biyya keessaa fi biyyoota ollaatii ukkaamsanii garii mana hidhaatti guuruu, kaan immoo ajjeesuu fi gara dabarsuun muddama uumuuf asii fi achi fiigaa jiru. Kijibni Wayyaanotaa fi fakkaattotni isaanii ABO fi walii gala qabsoo Oromoo irratti tarrisan: ABOn dhiphoo dha, shoororkeessituu dha, hooggannni ABO nama ajjeesa, nama qala, ABOn ergamaa alagaa ti, qabsoon Oromoo ummatoota kaan balleessuuf adeema, …kkf. kan jedhu olola hundee hin qabne dha. Olola fokkisaa gantoota sabaa fedhii dhuunfaa guuttachuuf jecha dantaa saba ofii balaa irra buusuuf luffisan keessaan oofuudhaan tokkummaa ummata Oromoo diiguu fi qabsoo bilisummaa Oromoo balleessuuf bara baraan dhama’u. Miidiyaa of harkaa qaban kan akka Dhaabbata Raadiyoo fi Televiziona Itoophiyaa, gaazexoota mootummaa, raadiyoo Faanaa, marsariitii isaanii kan akka Ayigaa Forum, Tigraay Online, Waarkaa, mana pal talk, akkasumas Youtube Gadaa TV fi kan kana fakkaatutti gargaaramanii sum’ii diinummaa isaanii Oromootti facaasuuf aaragalfii dhabaa jiru. Akeekni olola Wayyaanee inni guddaan bara baraan ummata Oromoo gandaa fi gosaan wal irratti kakaasee tokkummaa isaa laaffisuu fi qabsoo bilisummaa Oromoo dadhabsiisuu akka tahe amma kan hin hubanne jira hin fakkatu. Fedhiin isaa duula qorqalbii ummata Oromoo irratti oofuudhaan akka ummatichi boquu gadi qabatee sirna saamichaa fi hacuuccaa isaa ameen jedhee jalatti bulu taasisuuf ummaticha shoororkeessuu dha. Shoororkaa uumee ittiin ummata sodaachisa, doorsisa. Addatti ammoo yeroo ammaa ummatni Oromo Wayyaanee irratti tokkummaa isaa jabeeffatee sochii cimaa bifa gara garaatiin gochaa jiru irraa rifaatuu guddaa keessa waan seeneef olola kana haaromfate. Kana malees ummata Oromoo fi ummatoota cunqurfamoo empaayerattii keessa jiran kan biroo gidduutti shakkii uumuun akka waliif hin tumsine taasisuuf tattaafata. Mootummaan farra ummataa kun shakkii fi sodaa ummattoota gidduutti uumuun imaammata qoqqooodanii bituu akka hordofu ifaa dha. Ummatoota cunqurfamoo walitti diree dhiiga wal dhangalaasisaa ofii nagaadhaan giddduutti jiraachuun imaammata Wayyaanee dhaabbataa dha. Mootummaan Wayyaanee duula ololaa Adda Bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti oofutti dabalee, maqaa miseensota ABO, shoororkeessitoota fi kkf. itti maxxansuun lammiiwwan Oromoo mana hidhaatti guura. Lammiiwwan Oromoo nagaa mana hidhaa keessatti dararee beelaa fi dhukkubaan akka du’an taasisa. Mootummaa nama ajjeesee qaanii tokko malee “of ajjeese.” jedhu dha. Namoota miseensota Adda Bilisummaa Oromoo ti jedhu shoororkeessummaan yakkee mana murtii!
federaalaa ofii itti ajajutti dhiheessee murtii jal’aa itti dabarsa. Sababa Bilisummaa Saba ofiif falmatan qofaaf yakka tokkoon maleetti hidhaa umrii guutuu fi du’aan adabuun mootummaa dabaa fi cubbuu guddaa ummata Oromoo fi kanneen biroo irrattis raawwataa jiruu dha. Mootummaan Wayyaanee, shoororkeessaan Sabboontota Oromoo mirga Oromoof falman bak ka argamanitti akka ajjeefaman maqaa isaanii tarrisee facaasaa akka jirus ragaa waliin ifa bahee jira. Duula Oromoo bara baraan shoororkeessuu bal’inaan itti fufee jira. Kana malees humnooti in tikaa Wayyaanee baqattoota Oromoo sirna isaa jalaa baqatanii biyya ollaa keessa jiraatan ad amsanii ukkaamsuu fi ukkaamsisuu irratti argamu. Obbo Dabbasaa Guyyoo Saafarroo, jaarsi umriin waggaa 80, Fulbaana 27, 2015 Naayiroobii keessaa ukkaamsamanii hanga ammaa achi buuteen isaanii hin baramne. Akkasumas baqattootni Oromoo maqaan tarrifame garii wal ta’iinsa humnoota tikaa Wayyaanee fi poolisoota Keeniyaatiin Naayiroobii fi bakkoota birootii guuramanii maqaa gooltummaatiin mana hidhaa biyya ormaa keessatti dararamaa jiru. Akka kanaan dalagaan gooltummaa mootummaa Wayyaaneetiin raawwatamu daangaa biyyaa fi biy yoota ollaa irra utaalee sadarkaa idiladdunyaatti tarkaanfateera. Wayyaaneen soba ija baasee fi olola dharaa oofuudhaan umrii bittaa ofii dheereffachuuf dhama’a. Soba tarrisuun, soba dhugaa fakkeessuu fi ummatoota gidduutti shakkii fi sodaa uumuun aangoo irra of tursuuf tattaafata. Kun tooftaa dhaabbataa fi dulloomaa murni kun kana tu na baasa, kana malee jiraachuu hin danda’u jedhee waggoota digadamii afuriif itti gar gaarame; ittis gargaaramaa jira. Olola dharaa oofuu mala jireenyaa taasifate. Murni aangoo dhuunfatee deggersa ummataa hin qabnee fi yeroo hunda bir’ataa jiraatu kun, fuula duras hanga gaafa aangoo irraa darbamuutti shira akkasii dalaguu irraa if duuba hin deebi’u. Umrii bittaa ofii dheereffachuuf olola diiggaa fi sum’aawaa oomishee ummata keessa facaasuun shakkii fi afanfaajja’iinsa uumuu irraa hin dhaabbatu. Mootummaa deggersa ummataa fi hundee hin qab ne humnaa fi ololaan biyya bulchuuf tattaafatu dha. Wayta amma Addi Bilisummaa Ummata Tigraay wal dhabbii of keessatti qabuu fi beela dabalatee rakkoolee hawaasummaa adda addaa ummatoota empaayerattii hudhanii qaban dhok suuf oduu fi fiilmii sobaa oomishee ilaalcha ummataa gara dabarsuuf abbala. Kana malees dhi hee bari’u mootummaa fi ummata biyya ollaa irratti olola jibbaa facaasuun ilaalcha ummatoota Itoophiyaa keessa jiranii gara dabarsuun bara bittaa isaa dheereffachuu barbaada. Hunda caalaa immoo, Adda Bilisummaa Oromoo dabalatee Tumsi Bilisummaa fi Dimokraasii Ummatootaa dhaabotni ummatoota cunqurfamoo shan dhiheenya ijaaran mootummaa Wayyaanee yaaddoo keessa buusee jira. Kanaaf waan qabatuu fi gadi dhiisu isa wallaalchisee akka saree maraatuu olii fi gadi kaachuun, keessaahuu, ummata Oromoo unkuruu irratti fuulleffate. Adda Bili summaa Oromoo fi ummata Oromoo irratti olola dharaa kan maqaballeessii oofee bulguu fakkeessuudhaan ummatoota biroo fi hawaasa addunyaa duratti dhiheessuuf tattaafata. Haa ta’u malee ummata Oromoos ta’e ummatootni cunqurfamoon empaayerattii keessa jiran olola dharaa fi tooftaa dulloomaa Wayyaanee kanaaf gurra kennaa hin jiran. Ummatootni em paayerattii Mootummaan Wayyaanee mootummaa ummata sobuu fi sobaan jiraatu ta’uu erga itti dammaqanii tureera. Mootummaa osoo ummatni beela’uu quufatu jira, dinagdee biyyaa da chaadhaan guddisnee jirra jedhuu fi kijibaan jiraatu ta’uu hundatu beeka. Mootummaa mirga dhala namaa gara jabinaan dhiitaa, bilisummaa namtokkee fi sabaa irra ejjetaa sirna dimokraasiin ijaaree na faarsaa, jedhee ija dhiibee ummatoota nin bulcha jedhuu fi hawaasa
addunyaa sobu dha. Haa ta’uu yeroon isaa yeroo itti ummatatti hurrii maranii bulchuun dan da’amu miti. Yeroo itti dammaqiinsi ummataa fi guddinni teknooloojii beeksisaas guddate ak kasii keessa miidiyaadhaan uummata sobuu yaaluun of gowoomsuu dha. Akkasumas umma tootni empaayerattii, keessaahuu, ummatni Oromoo har’a ololaa fi tarkaanfii shoororkeessum maa mootummaa Wayyaanee fi lukkeelee isaaf jilbeenfataa hin jiran. Hidhaa fi ajjeechaan qab soo keenya hin dhaabu, warri har’a karaa baay’ee nutti duulaa jiran boru karaa itti dhugaa fi ol’aantummaa ummataa jalaa bahan tokko illee hin qabaatan jechuudhaan hamilee fi muran noodhaan diina hanga funyaaniitti hidhate dura dhabbataa jiru. Dhuma irratti injifannoon kan ummataa akka ta’us shakkiin hin jiru.
Adda Bilisummaa Oromoo Sadaasa 05, 2015
Oromia:Ijoo Dubbii Adda Bilisummaa Oromoo: Mootummaan Wayyaanee Karoora Master Plaanii Magaalaa Finfinnee Humnaan Hojii Irra Oolchuuf Murteeffachuun Isaa Qabsoo Mirga Abbaa Biyyummaa Ummata Oromoo Of Booda Hin Deebisu. October 2, 2015
Ummatoota Beela Irraa Baraaruun Akeeka Mootummoota Itophiyaa Tahee Hin Beeku. August 31, 2015
Tags: ABO, Dhaamsa ABO, OLF, Oromo, Oromummaa OLF
Ummatoota Beela Irraa Baraaruun Akeeka Mootummoota Itophiyaa Tahee Hin Beeku.
Mootummaan Dargiis mirgi ummatootaa kabajamuu, mirgi lammiileen walabummaan hojjatanii jiraatuu tikfamuu irraa dantaa waan hin qabneef empaayerittii keessaa beela dhabamsiisuu hin dandeenye. Waan taheef bara Dargiis beela xiqqaatu marroo lama mudateen ummatootni miidhamuu jalaa hin baraaramne. Sababa beelaan biyya ollaatti baqaan godaanuun itti fufe. ijoo-dubbii-abo-hagayya-31-2015
Sirna kufuuf daddaaqamaa jiru jireessuuf kanneen dhama’an dhumni isaanii salphina February 13, 2015
Posted by OromianEconomist in OLF, Oromia News, Oromian Voices, Oromiyaa, Oromo, Oromo Liberation Front (OLF), Oromo Nation, Oromo News, Oromummaa.
Tags: Dhaamsa ABO, Oromia, Oromiyaa, Oromo, Oromo people, Oromummaa
Sirna kufuuf daddaaqamaa jiru jireessuuf kanneen dhama’an dhumni isaanii salphina
(Ibsa ABO duula diinaan Oromoo irratti baname ilaalchisee)
Gurraandhala 13, 2015 (Oromo Liberation Front) — Mootummaan Wayyaanee ummatoota irraan gama dinagdee, siyaasaa fi hawaasummaan miidhaa ol aanaa dhaqqabsiisaa jiru kufaatiin isaa kan hin hafne tahuu caalaatti wayta mirkanaa’ee jiru kanatti abdii kutannaa irraa shira gara garaa hojjatuun bittaa isaa itti fufsiisuuf yaalii ijibbaataa gaggeessaa jira. Ummatoota bittaan nu gahe! Sirni Cunqursaan nurraa haa ka’u! jechuun bifa gara garaan qabsoo adeemsisan kolaasuu fi kan ummatoota irraa deggersa qabu fakkaatee mul’atuuf wixxifannaan adeemsifamaa jirus lammiiwwan Itophiyaa gara garaa addatti ammo lammiilee Oromoo sirnicha baqatuun biyya alaatti argaman irratti kan xiyyeeffate tahuu sochii diinni gochaa jiru irraa hubatama.
Lukkeelee diinaa bittoota murna bicuuf riqicha tahanii ummata Oromoo saamuu fi saamsisuu, ajjeesuu fi ajjeesisuu, biyyaa baqachiisuu fi hiisisuu keessatti shoora ol aanaa qaban, ergaa diinaa kana qabatanii biyyoota alaa keessa oggaa laban kan arge isaan taajjabuu irra dabree akka namaatti yaaduu isaanii shakka. Ergamtootni osoo ummatni Oromoo bakka bu’ummaan hin filatiin humnaan bakka bu’aa of taasisan kunneen hin galleef malee kanneen har’a maqaa guddinaa fi misoomaan isa hawwatuuf itti bobba’an kanneenuma kaleessa miidhaa isaanii baqa biyyoota adda addaatti baqatani dha. Kanneen Abbaa fi Haadha, Obbolaa fi firoottan, ilmaan, akkasumas hiriyootni isaanii jalaa ajjeefaman, mana hidhaatti guuramani hiraaraa jirani dha.
Wayyaanee dantaa murna bicuuguutuuf jecha ijaaruu irra diiguu, haqa lagatuun kijibaaf dhaabbatu , mirga dimokraasii dhugoomsuu irra bittaa abbaa irrummaa jireessuu, biyya misoomsuu irra deegsuun beekame, mootummaa guddinaa fi misoomaa ti jechuun duulli ergamtoota sirnichaan biyyoota alatti eegalame fudhatama fi deggeraa dhabee bakka dhaqan maratti mormii ol aanaa fi salphina guddaan akka deebi’an taasifameera. Haa tahu malee salphifamaa fi xiqqeeffamaa harca’aa funaannatuu akka aadaa fi kabajaatti fudhatan lukkeeleen diinaa kunneen, garaa itti nyaatan malee sammuun ittiin yaadan waanitti hin uumamneef mormii irra gahaa jiru danda’aa fi obsaa ergaa diinaa baqataa Oromoon akka gahaniif karoora itti kenname itti fufuuf murteeffatanii jiran.
Lukkeeleen diinaa raata’oo kunneen ummatni Oromoos akkuma isaanii akka raata’uuf hojjatan. Akkuma isaanii har’a nyaadhee bullaan ana gaha! jechuun ulfina isaa gurguree akka jiraatu barbaadan. Akkuma isaanii ashkara alagaa tahee biyya isaa irratti alageeffamee jireenya gadadoo fi salphinaa akka jiraatu barbaadu. Waggoota 24 boodallee fedhiin ummataa maal akka tahe hubatuu dadhabu/diduu irraa mirga isaaf falmatuu dhaabee akka harka kennatuuf irratti bobba’uun isaan taajjabsiisa malee ummata ejjannoo isaa hin jijjiirsisu. Kanneen of xiqqeessanii ummata xiqqeessuuf yaalan hin galleef malee ummatni guyyaa irratti of irroomsanii eegalee kan isaan hin deggerre, waliinis hin dhaabbanne tahuu ifatti itti himeera. Mormuun dura dhaabbatee walabummaa fi bilisummaa isaaf falmateera, falmaas jira.
Jilli gara garaa muddama qabsoon ummatootaa gooftolii isaanii irraan gahaa jiru jalaa baraaruuf dhiheenya kana dirqama Wayyaanee fudhatuun Awrooppaa, Ameerikaa, Kanadaa fi Austraaliaatti bobba’uun Oromoota biyyoota kanneen keessa qubatan gowwoomsuuf yaalanii taasisaniin salphifamaa akka turan midiyaaleen gabaasaa turan. Jilootni bakka gahan hundatti salphifamaa turan kanneen kan dhagahu hin argatiin malee, lafti mana irratti ijaarratan magaala Finfinneetii isiniif kennama, qabeenya qabdan investment/misooma irra akka oolchitaniif deggersi addaa fi barbaachisu isiniif kennama jechuun waadaa kijibaa tarrisuun hawwataa akka turanis gabaafamaa ture. Biyyi misoomaa fi guddataa akka jirtu, wal qixxummaan ummatootaa mirkaneeffamuu fi mirgi dimokraasii dagaaguu qaanii malee haa dubbatan malee haalli empaayera Itoophiyaa fi kan ummataa addaan fagoo tahuun hubannaa ummataan ala hin turre.
Mootummaa abbaa irreef aangoo isaa turfatuun alatti kan itti mul’atu waan hin jirreef hanga kufutti tikfatuuf dhidhiitatuu hin dhaabu. Waan taheef Wayyaaneen salphina ergamtoota isaa Awrooppaa fi Ameerikaa itti bobbaafate irra gahe irraa barachuu hanqatee baqattoota Oromoo Afriikaa biyyoota gara garaa keessatti argaman irratti karoora bal’aa baasuun akka sossobanii biyyatti deebisaniif, dadhabame ammoo mootummoota of gargaarsisuun biyyatti deebisuu irratti akka hojjataniif ergamtoota isaa bobbaasee jira.
Baqattoota Oromoo, Sudaan Kaabaa fi Kibbaa, Kenyaa, Ugaandaa, Jibuutii fi biyyoota birootti argaman kanneeniinis waadaa kijibaa:
Lafa mana irratti ijaarratan magaala Finfinneetii argattu;
Manni koondominemii isiniif kennama;
“Garee business “ jedhuun embaasii jalattii yo ijaaramtan embaasiin deeggarsa addaa isiniif godha kan jedhanutu argamu.
Haqni bobbaa diinaa kanaan duuba jiru garuu, waldaalee maqaa baqattoota Oromoon ijaaraman diiguun waldaa Itophiyaa jala galchuu, suuraa fi vidiyoolee baqattootaa midiyaa isaanii irratti agarsiifatuun hamilee ummataa biyya keessaa qabsoo irratti finiinsaa jiru cabsuu, baqataa gowwoomsuun biyyatti akka deebi’u taasisuun kanneen hafan galuu danda’u, rakkoon homaatuu irra hin gahu, jechuun golgaa UNHCR irraa argatan akka dhaban taasisuu, Sochii baqattoota Oromoo hordoffii fi to’annoo embaasii Itoophiyaa jala galchuu; hidhaa fi ajjeechaa isaanii jalaa kanneen baafatan biyyatti deebisuun mana hidhaatti darbuu kan akeekkate dha.
Sirni heeraa fi seera ofiif tume cabsuun lammiilee seeraa fi murtiin alatti ajjeesu, badiin alatti raga kijibaan hidhaa waggaa dheeraa itti murteessee manneen hidhaa keessatti dararuu fi humna tikaa fi poolisaa amanamoo isaa tahaniin tumsiisaa jiru, misoomaa fi Sirni heeraa fi seera ofiif tume cabsuun lammiilee seeraa fi murtiin alatti ajjeesu, badiin alatti raga kijibaan hidhaa waggaa dheeraa itti murteessee manneen hidhaa keessatti dararuu fi humna tikaa fi poolisaa amanamoo isaa tahaniin tumsiisaa jiru, misoomaa fi guddina, mirga dimokraasii fi namoomaa ilaalchisee ololli adeemsisu kan madaala kaasu miti. Qabiinsi mirga namoomaa fi mirgi dimokraasii biyyattii maal akka fakkaatu ummatoota biyyattii irra dabree kan alagaan iyyuu kijiba tahuu hubatee dura dhaabbataa jiru tahee jira.
Ummatni Oromoo biyya keessaas haa tahu biyya alaa kijiba Wayyaaneen kan hin dagamne tahuu ifatti agarsiisaa jira. Addatti ammo lammiileen Oromoo biyyoota alaa adda addaa keessa jiran ergama diinaa fashalsuun qoodni gumaachan kan Oromoo hunda boonse, ergamtoota diina rifaasise dha. Bobbaa’an jiilota Wayyaaneen baqattoota Oromoo Afriikaa jiran irratti xiyyeeffates akkasuma akka fashalu shakkiin hin jiru. Haa tahu malee haalli biyyoota Afriikaa, akka biyyoota Awroppaa fi Ameerikaa aanjaa kan hin qabne taahuun beekamaa dha. Waan taheef , hawaasni Oromoo biyyoota adda addaa keessatti argamtan obboleeyyaan keenya diinni itti xiyyeeffatuun shira irratti raawwatuuf abuurratee jiru hordofuun miidhaa diinaa akka qolatuu danda’aniif tokkummaan akka cinaa dhaabbattan ABOn yaadachiisa. Midiyaaleen Oromoo fi kanneen haqaaf dhaabbatan kan biros gochaa diinummaa fi farra namoomaa baqattoota Oromoo irratti xiyyeeffate kana saaxiluun garee haqaaf dhaabbatan tahuu akka mirkaneessitan ABOn waamicha isaa isiniif dabarsa. Akkasumas jarmiyaaleen kabajaa mirga namaaf dhaabattan duula mirga baqattoota Oromoo ukkaamsu Wayyaaneen itti jiru akka hin milkoofne taasisuuf tumsa barbaachisu akka gootan waamicha isaa dabarsa.
Shirri diinaan Qabsoo bilisummaa Oromoo irratti raawwatamu qabsoo caalaatti finiinsa malee hin laaffisu. Kanaaf lammiileen Oromoo biyya keessaaf alaa bittaa Wayyaanee gateettii ummataa irraa buusuuf qabsoo bilisummaa caalaatti finiinsuun gaaffii yeroo tahuu hubannee tokkummaan haa kaanu.
Gurraandhala, 13, 2015